Suuqa: Kooxda Manchester United Oo Diirada Saartay Daafac Lagu Qiimeynayo Aduun Dhan £47 Milyan Kana Xamaasha Serie A – Kooxda.com
Home 2017 January Ingiriiska, Italy, Suuqa, Wararka Maanta Suuqa: Kooxda Manchester United Oo Diirada Saartay Daafac Lagu Qiimeynayo Aduun Dhan £47 Milyan Kana Xamaasha Serie A
Suuqa: Kooxda Manchester United Oo Diirada Saartay Daafac Lagu Qiimeynayo Aduun Dhan £47 Milyan Kana Xamaasha Serie A
January 10, 2017 · by	Mustafa Atam · 0
Kooxda Manchester United ayaa aad loola xiriirin inay suuq ciyaareedkan bisha Janaayo ka adeegan doonaan walow horay loola xiriiriyay Victor Lindelof baose ilaa haatan aan war cad laga soo saarin inuu ku biirayo kooxdan reer ingiriis.
Waxaa jira warar xan oo kooxda Manchester United la xiriirinaya daafaca kooxda Roma wiilka birlabta ah ee lagu magacaabo Kostas Manolas kaasi oo lagu qiimeeyo aduun gaaraya £47.6 Milyan.
Jariirada The Sun ayaa sheegaysa in xidigan uu inbadan ku raad joogay macalinka kooxda Shayaadiinta cas-cas ee Jose Mourimho haatana masuulku diyaar u yahay inuu wiilka kula midoobo Old Trafford.
Warka ayaa intaasi kusii darayay in kooxda Manchester United horay ugu hungowday saxiixa wiilkan kadib markii kooxda reer Manchester lagusoo dhirbaaxay dalab ay xidiga ka gudbiyeen oo gaarayay £32.1 Milyan.
Wakhti xaadirkana waxaa lagusoo waramaya in kooxda Roma ay soo diidi karto dalabka Man United ee ah £47.6 Mikyaj waxeyna jabhada reer talyaani doonayaan inaysan aqbalin dalab ka hooseeya £52 Milyan waa sida la sheegay e.
Si kastaba kooxda Manchester United ayaa bishan janaaulyo lala xiriiriyay daafacyo badan oo ay kamid ahaayeen daafaca Benfica ee Victor Lindelof iyo sidoo kale ninka reer Portugal ee Jose Fonte.
Filed in: Ingiriiska, Italy, Suuqa, Wararka Maanta